June | 2010 | गणेश कार्कीको ब्लग
HIGHLIGHTS OF COMMITMENTS AND IMPLEMENTATION INITIATIVES
Posted on June 28, 2010 by नेपाली मुटु
The following isalist of some of the agreements reached and initiatives announced during the Johannesburg Summit. This list is not exhaustive, but reflects some key highlights of the Summit process. The commitments shown are those agreed in the Implementation Plan adopted by Governments at the close of the Summit.
· Commitment to halve the proportion of people without access to sanitation by 2015; this matches the goal of halving the proportion of people without access to safe drinking water by 2015.
· The United States announced $970 million in investments over the next three years on water and sanitation projects.
· The European Union announced the “Water for Life” initiative that seeks to engage partners to meet goals for water and sanitation, primarily in Africa and Central Asia. The Asia Development Bank provideda$5 million grant to UN Habitat and $500 million in fast-track credit for the Water for Asian Cities Programme.
· The UN has received 21 other water and sanitation initiatives with at least $20 million in extra resources.
· Commitment to increase access to modern energy services increase energy efficiency and to increase the use of renewable energy
· To phase out, where appropriate, energy subsidies.
· To support the NEPAD objective of ensuring access to energy for at least 35% of the African population within 20 years
· The nine major electricity companies of the E7 signedarange of agreements with the UN to facilitate technical cooperation for sustainable energy projects in developing countries.
· The European Union announceda$700 million partnership initiative on energy and the United States announced that it would invest up to $43 million in 2003.
· The South African energy utility Eskom announcedapartnership to extend modern energy services to neighboring countries.
· The UN has received 32 partnership submissions for energy projects with at least
$26 million in resources.
· Commitment that by 2020, chemicals should be used and produced in ways that do not harm human health and the environment.
· To enhance cooperation to reduce air pollution.
· To improve developing countries’ access to environmentally sound alternatives to ozone depleting chemicals by 2010.
· United States announced commitment to spend $2.3 billion through 2003 on health, some of which was earmarked earlier for the Global Fund.
· The UN has received 16 partnership submissions for health projects with $3 million in resources.
· The GEF will consider inclusion of the Convention to Combat Desertification asafocal area for funding.
· In Africa, development of food security strategies by 2005.
· The United States will invest $90 million in 2003 for sustainable agriculture programmes.
· The UN has received 17 partnership submissions with at least $2 million in additional resources.
· Commitment to reduce biodiversity loss by 2010.
· Commitment to reverse the current trend in natural resource degradation.
· Commitment to restore fisheries to their maximum sustainable yields by 2015.
· Commitment to establisharepresentative network of marine protected areas by 2012.
· Commitment to improve developing countries’ access to environmentally-sound alternatives to ozone depleting chemicals by 2010.
· Undertake initiatives by 2004 to implement the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land Based Sources of Pollution.
· The UN has received 32 partnership initiatives with $100 million in resources.
· The United States has announced $53 million for forests in 2002-2005.
Chipko Movement 2
Posted on June 24, 2010 by नेपाली मुटु
Chipko Movement, started in 1970’s, wasanon violent movement aimed at protection and conservation of trees and forests from being destroyed. The name of the Chipko moment originated from the word ’embrace’ as the villagers used to hug the trees and protect them from wood cutters from cutting them. Chipko movement was based on the Gandhian philosophy of peaceful resistance to achieve the goals. It was the strong uprising against the against those people, who were destroying the natural resources of the forests and disturbing the whole ecological balance.
It was first started in the Chamoli district in the year 1973 and from there it spread to the other parts of the country. There is one very famous story about the girl, Amrita Devi, who died while trying to save the trees grown in her village. The village was under the rule of the local Maharaja, who desired to builtapalace for his family. He ordered his servants to bring wood from the nearby village. When the wood cutters arrived the village to cut the tress, Amrita and other women of the village jumped in front of the trees and hugged them. She said they will have to cut her first before the trees. The servants were helpless to follow the orders and cut the tree. Amrita Devi died on the spot. Before offering her head to the Maharajas servants, Amrita enchanted :- “seir santhe runkh raheb, to bhee sastojan” (it is tillasmall price to pay if at the cost of my head the tree is saved).
The incident inspired the several other rural womens, who in 1970’s launched such similar movements in different parts of India. The incident inspired the several other rural womens, who in 1970’s launched such similar movements in different parts of India.It is really surprising that the women of that age were better aware about the significance of forests. The rural women in India actively participated in the movement, who knows about deforestation and its future consequences. Some of the key women leaders who fought for the protection of forests, whom they call it their maternal mother were Gaura Devi, Sudesha Devi, Bachni Devi, Dev Suman, Mira Behn, Sarala Behn and Amrita Devi.
The Chipko Movement gained momentum under Sunderlal Bahuguna, an eco activist, who spent his whole life persuading and educating the villagers, to protest against the destruction of the forests and the Himalayan mountains by the government. It was he, who made appeal to the Prime Minister of India Mrs Indira Gandhi to ban the cutting of tress. He shouted the slogan ‘ecology is the permanent economy’. Another main leader of the movement was Mr. Chandi Prasad Bhatt, who advocated the development of small scale local industries, which were based on the sustainable use of the forests resources for the local benefits. There were many slogans that originated during that period. For example :-
Save then from being felled
Save them from being looted”
Another one says :-
And drive away the axeman”
One of the major achievement of the Chipko movement was the ban on cutting the trees for the 15 years in the forests of Uttar Pradesh in 1980. Later on the ban was imposed in Himachal Pardesh, Karnataka, Rajasthan, Bihar, Western Ghats and Vindhayas. All this was done on the order of the Indian Prime Minister after the strong protests by the activists through out the country.
यसरी लेखियो उर्गेनको घोडा
Posted on June 23, 2010 by नेपाली मुटु
अब फुरेका भरमा, एक दुई महिनामा उपन्यास लेख्ने दिन गए र यसरी उपन्यासकार हुने दिन पनि गए । अब उपन्यासकारले ‘फिल्ड’मा गएर पसिना चुहाउँदै अध्ययन-अनुसन्धान नगरी सुख छैन । लेख्न जान्नु मात्रै पर्याप्त छैन, किनभने लेखन भाषाको खेल मात्रै होइन । युग पाठकको पहिलो उपन्यास उर्गेनको घोडा अहिले निकै चर्चामा छ । यो उपन्यास लेख्न उनले चार वर्ष लगाए । तामाङ जातिलाई नजिकबाट हेर्न, बुझ्न र चिन्न उनी पटक-पटक मकवानपुरका कुनाकन्दरा पुगे, विभिन्न व्यक्तिसँग बहस र छलफल गर्दै जनयुद्धका विभिन्न आयामलाई विभिन्न कोणबाट हेर्ने र पर्गेल्ने प्रयत्न गरे ।
उर्गेनको घोडाको लेखनक्रममा युगले भोगेका सास्ती, तनाव, दुःख, हर्ष र आनन्दादिको बेलिविस्तार :
साथी उदय अधिकारीले मलाई फसाइदिए । ०६२ को प्रारम्भतिर होला, ध्रुवचन्द्र गौतम हेटौँडा आएका थिए । साँझको गफगाफमा उदयले मैले उपन्यास लेख्दै गरेको घोषणा गरिदिएँ । मैले अस्वीकार गरिनँ । जब कि, उपन्यासका नाममा एक हरफ पनि लेखेको थिइनँ । प्रशस्त उपन्यास लेखिसकेका ध्रुवचन्द्र गौतमको सुझाव थियो- धेरै सोच्ने होइन, पोखरीमा हाम्फाल्ने, पौडन स्वतः सिकिन्छ । म पनि हाम्फालेँ पोखरीमा, संकोच मान्दै, गुमनाम ढंगले, गोप्य तरिकाले । म यसो गर्न बाध्य पनि थिएँ, किनभने उदयले घोषणा जो गर्दिसकेका थिए । एकप्रकारले मलाई पोखरीको डिलबाट धकेलिदिएका थिए उनले ।
देशको राजनीति दिनहुँ नाटकीय ढंगले विकास हुँदै थियो । बाह्रबुँदे सहमति भइसकेको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रको सैनिक शासनले ‘प्रजातान्त्रिक’ दलहरूको साथ गुमाइसकेको थियो । एकातिर उपन्यास लेख्ने हठाग्रह, अर्कोतिर जनयुद्धकालीन समयको मिहिन इन्द्रेणीमय चित्र उतार्ने गहिरो प्यास । टल्सटय, गोर्की, चेखब, दोस्तोबस्कीजस्ता रुसी लेखकले आफ्नो समयको रुसको जिन्दगीका अनेक पक्षलाई चित्रमय जादु प्रदान गरे । माक्र्वेजजस्ता लेखक ल्याटिन अमेरिकी जीवनका शोषण र विद्रोह, आकांक्षा र दैनन्दिन परिवेशलाई भाषाको जादुगरी चलचित्र खिच्न सफल भए । फणीश्वरनाथ रेणुजस्ता भारतीय लेखकले भारतीय जनजीवनका अनेक घामछायालाई जाज्वल्यमान मोज्याकमा उतारे । के हामी हाम्रो समयको, हाम्रो परिवेशको, हाम्रो माटोको कथालाई क्षितिजसम्म पुर्‍याएर इन्द्रेणी झैँ टाँग्न सक्दैनौँ ? मनले प्रश्न गरिरहन्थ्यो ।
मसँग मैले भोगेका जीवनका झिल्का थिए । नजिकैबाट देखेका अनेक त्रासदीका लप्का थिए ।
मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दाका अनुभव थिए । मकवानपुरको भिमान हत्याकाण्डको दर्दनाक दृश्य मनको भित्री पर्दामा छापिएको थियो । अग्ला भीरपहरा, चुरेका खोँच, सुदूरगाउँहरू पुगेर छापामारसँग भलाकुसारी गरेका झल्याकझुलुक अनुभूति थिए । उनीहरूका आँखाका कोसमा फुलेका गुराँस हेर्ने मौका पाएको थिएँ । दुःखको विशाल पहाडमुन्तिर किचिएर, थिचिएर र मिचिएर बाँचिरहेका तामाङ गाउँहरूलाई सुँघेर अनुभूत गर्ने धृष्टता गरेको थिएँ । रातबिरात उठेर कम्प्युटरको किबोर्डमा औँला चलाउँथे र एक्लै खुसीले मख्ख हुन्थेँ । अक्षरका लस्कर बन्थे, भत्कन्थे । असफल हुन्थेँ, तैपनि खुसी नै हुन्थेँ । असफल हुनु पनि केही हुनु नै त हो ।
०६२ माघमा पोखरा जाने निधो गरेँ । १५ दिनका निम्ति क्याम्पसमा जाडो बिदा थियो । नौलो परिवेशले उपन्यास स्वतः लेखाउनेछ भन्ने बहाना -या भ्रम) थियो मनमा । घर व्यवहारका अदृश्य इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक किरण अर्थात् झयाउलाको प्रभावबाट मुक्त हुने इच्छा पनि थियो । मित्र सुरेश रानाभाटको डेरा थियो पोखरामा । छतबाट एयरपोर्ट र हवाईमैदान प्रस्ट देखिन्थ्यो । दिन र रातका परिधिलाई भत्काएर आफ्नै परिधि निर्माण गरेँ र अराजक शैलीमा उपन्यास लेख्ने धुन बाँच्न थालेँ । सुरेशको ल्यापटप मेरो साथी बन्थ्यो ।
एउटा मध्यरात म छतमाथि एक्लै टोलाइरहेको थिएँ, कथाको प्लट बुन्ने, अनौठा वाक्य सुझाउने उपक्रम चलिरहेको थियो मनमा । एकाएक हेलिकोप्टरको चहल-पहल बढयो हवाईमैदानमा । त्यो रात माओवादी जनसेनाले पाल्पाको तानसेनमा आक्रमण गरेको थियो । म किंकर्तव्यविमूढ भएर हवाईमैदानतिर हेरिरहेँ । हेलिकोप्टरले लास र घाइते ओसारिरहेका थिए सायद । यस माटोमा उम्रेका नयाँ आकांक्षा, यही परिवेशमा पलाएका विचित्र बलिदानी भावनालाई उपन्यासको संसारमा प्रतिस्थापन गरिछाड्ने इच्छा अझ तीव्र भयो त्यो रात । पोखराबाट अधुरो उपन्यासका करिब डेढ सय पेज सिडीमा भरेर हेटौँडा फर्किएँ ।
यसैबीच, दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो । दिलोज्यानले भाग लिएँ । मैले जुन समयको चित्र उतार्न अधुरो उपन्यास लेखेको थिएँ, जनआन्दोलनपछिको स्थितिले त्यो अधुरोपनलाई सधैँका लागि अधुरै राख्न भूमिका खेल्यो । परिवेश बदलिएपछि उपन्यास अधुरै किन रहन गयो ? मैले बुझ्दै गएँ, उपन्यासमा पात्रहरू थिए, उनका उच्छवासहरू थिए, तर फिक्सनको चरित्रलाई इतिहासको चरित्रले ढाकेर राखेको रहेछ । त्यसैले इतिहासको पानामा नयाँ अध्याय पल्टिँदा उपन्यास थिचियो । देशको राजनीति ऐतिहासिक मोडबाट अघि बढयो । माओवादी शान्ति सम्झौतामा आयो, जनसेना क्यान्टोनमेन्टमा बस्न थाले । सारा विस्मयकारी घटनाक्रम विस्फारित नजरले हेर्दाहेर्दै उपन्यासको अधुरो पाण्डुलिपि मनभित्र मसिनो धर्सोजस्तो सम्झनामा बिलायो ।
बिदामा मकवानपुरका डाँडाकाँडा घुम्न थालेको थिएँ । जीवनका वास्तविक रंगको अनुसन्धान गर्नु मेरो उद्देश्य हुन्थ्यो । ग्रामीण जीवनका अनेक पक्ष खोतल्ने अभियान हुन्थ्यो । केही दिन चितवनको शक्तिखोर क्यान्टोनमेन्ट क्याम्पमा पनि बसेँ । घाइतेका पीडा सुनेँ । जीवनलाई चुनौतीसरह बाँचिरहेका मान्छेका कथा सुनेँ ।
०६४ को दसैँ बिदामा फेरि उपन्यास लेख्ने धुन सवार भयो । उदय घर गएको मौका थियो, उनको डेराको साँचो लिएँ । उदय र डिल्ली सरका कोठा मेरा निम्ति उदार हृदय खोलेर खाली-खाली थिए । मैले पुरानो डेस्कटप कम्प्युटर त्यहाँ ल्याएँ, पुस्तक ल्याएँ अनि पुरानो ड्राफ्ट पनि अघिल्तिर राखेँ । अधुरो उपन्यासलाई पूरा गर्नमा मन गएन, बरु नयाँ ढंगले विषयवस्तु उनेर अर्को उपन्यास सुरु गरेँ । करिब १५ दिनको एकान्तबासमा पुनः अर्को पौने दुई सय पेजको नयाँ उपन्यास तयार भयो, तर त्यो पनि अधुरै । त्यो अधुरोपनले पूरै एक वर्ष निलिदियो ।
०६५ को जेठ महिना पुनः गर्मी बिदाको निरस तापक्रम बोकेर आयो । म दामन जान चाहन्थेँ, चिसो र रमणीय वातावरणमा बसेर उपन्यास लेख्न । मनमा रुमानी भाव पलाउँथ्यो, मानौँ त्यसरी दामनको लेकाली मौसमले स्वतः उपन्यास लेखाउँथ्यो । उपन्यास लेखिछाड्ने चाहनाको हावाले त्यस्तो काल्पनिक उडानका वेग सिर्जना गरिरहन्थ्यो । दामनको शितोष्ण बागवानी विकास केन्द्रको गेस्टहाउसमा बसेँ ।
हाम्रो माटोको मौलिक जीवन खोज्ने क्रममा तामाङ जातिको इतिहास र किंवदन्ती खोज्न थालेँ । केही समयअघि यस्तो आइडिया फुरेको थियो, उपन्यासलाई इतिहासको निरस विषयबाट फिक्सनको रमणीय संसारमा लैजान म केही नयाँ खोजिरहेकै थिएँ । सर्कसबाट फर्किएका बच्चाबच्ची, वेश्यालयमा कैद भएका मंगोलियन आँखा, विकट पहरामा बिरानो जीवन बाँच्ने गरिब तामाङ गाउँले अजीवको चिसो कुदाउँथ्यो रक्तनसामा । किंवदन्ती, मौखिक इतिहासका अवशेषको संकलन र थुप्रै मानिससँग गरिएका कुराको रंगी-बिरंगी संसारबाट उर्गेनको घोडाको अमूर्त चित्र मनमा बन्यो । म उत्साहित भएँ र त्यसलाई अझ मूर्त बनाउन कम्मर कसेर लागेँ । तर, दामनमा धेरै दिन बस्न सकिएन । त्यसपछि एक वर्ष लेख लेख्ने, अध्ययन गर्ने र अंग्रेजी पढाउने चक्करमै दिन बितिरहे । दिनलाई रोक्न सकिन्नथ्यो, उपन्यास अधुरै छ भनेर दिनलाई रोक्ने धृष्टता गर्न पनि के सकिन्थ्यो ।
बल्ल पूरा भयो उपन्यास
०६६ को दसैँ-तिहार बिदा करिब एक महिनाको थियो । मैले घरमा सल्लाह गरेँ । यसपटकको दसैँ-तिहारको रमाइलो कटौती गर्ने र उपन्यास पूरा गरिछाड्ने । घरनजिकै रहेको एभोकाडो होटलको कोठा नम्बर १०८ मा डेरा सरेँ । रात-दिन काम गर्नुको विकल्प थिएन । यसपटक पनि मसँग उपन्यास थिए, मार्खेजको वन हन्ड्रेड इयर्स अफ सोलिच्युड, विलियम फाक्नरको साउन्डस् एन्ड फयुरी, निर्मल बर्माको वे दिन, गोर्कीको आमा, पारिजातको शिरीषको फूल, दोस्तोबस्कीको क्राइम एन्ड पनिस्मेन्ट, टल्सटयको वार एन्ड पिस इत्यादि । नेपाली शब्दकोश, तामाङ जातिका मौखिक इतिहास, संस्कृति, लोककथा र किंवदन्तीका किताब, नन्दकिशोर पुनको इतिहासका रक्तिम पाइलाहरू, माओवादी जनयुद्धसँग सम्बन्धित दस्तावेज, संस्मरण, देवकोटाका निबन्धहरूको संग्रह इत्यादि पनि ओछयानमा यत्रतत्र छरिएका थिए । इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरिएका कैयौँ किताब तथा तामाङ जातिसँग सम्बन्धित सामग्री पनि अदृश्य मेमोरीभित्र उग्राइरहेका थिए । केही दिनसम्म पढेर बसिरहेँ । अहँ उपन्यास सुरु गर्ने कुनै दमदार प्रसंग फुरेको थिएन ।
एक दिन मैले सुरु गरेँ । कठोरताका साथ पूरै रात अनिदो बसेर मैले उपन्यास सुरु गरेँ । त्यतिन्जेलमा दिमागमा उपन्यासको मोटामोटी खाका बनाएको थिएँ, तर त्यसलाई लिपिबद्ध गरेको थिइनँ । पच्चीस अध्यायलाई शीर्षकमा बाँडेको थिएँ, तर हरेक शीर्षक कथाका रूपमा होइन, सामान्य अनुमानका रूपमा मस्तिष्कमा उब्जेका थिए । दिनहुँ लेख्दै गएँ र कथा आफैँ अघि बढ्दै गयो । उर्गेनको घोडालाई तामाङ जातिको बिर्सिएको, हराएको, दबाइएको इतिहासको एउटा मिथकीय विम्बका रूपमा अनुमान गरेको थिएँ र त्यो घोडाको विम्बले बोकेको इतिहास चेतनाले उत्प्रेरित गर्ने एउटी छापामार केटी म्हेन्दो भने मेरो मनमा गाढा छापजस्तो भएर बसेका थिए ।
म्हेन्दो भनेको फूल हो, तामाङ भाषामा । म्हेन्दो नामकी तामाङ केटी गाउँमा आइरहने छापामारको तिलस्मी विम्बसँग बहकिन्छे र क्रमशः छापामार जीवनमा पाइलो हाल्ने हिम्मत जुटाउँछे । ऊ छापामार हुनुसँग उर्गेनको घोडाको हिन्हिनाइ समरूप भएर आउँछन् । त्यो इतिहास चेतले उसलाई आफ्नो जातिको गुमेको इतिहास, बिर्सिएको आत्मसम्मान खोज्न उसलाई अभिप्रेरित गर्छ ।
तामाङ जातिका मानिसले मकवानपुरका विकट पहाडबाट आत्मसम्मानको अभियान सुरु गरेको कथा लेख्ने तयारी गरेपछि स्वतःस्फूर्त रूपमा रूपचन्द्र विष्टको ‘थाहा’ अभियान जोडिएर आयो । रूपचन्द्र विष्टका बारेमा सुनिएका किंवदन्ती र उनका संकलित रचनामार्फत प्राप्त हुने ज्ञानलाई उपन्यासमा उपयोग गर्ने कम्मर कसेँ मैले । अब इतिहासको उत्खननसँगै वर्तमानको संघर्षका खाका केही प्रस्ट भए । मेरो उपन्यासको प्लट पनि प्रस्ट हुँदै आयो । लेख्दै जाँदा कथाका पोया फुक्दै जान्थे । यो वास्तवमै हचुवा लेखन थियो, योजनाविहीन र बिल्कुल भावनाको बलले गरिएको अव्यावहारिक अभ्यास । तर, जुनसुकै सर्तमा यसपटक उपन्यास अधुरो नछाड्ने संकल्प गरेको थिएँ मैले ।
दसैँ र तिहार गरेर परिवारसँग जम्माजम्मी चार दिन बिताएँ । दिन रातमा परिणत भइरहेको थियो, रात दिनमा । कैयौँ दिन चौबीसै घन्टा जागै काम गरेको थिएँ । उपन्यासले वास्तवमै गति लियो । त/m करिब ६० प्रतिशत काम सिध्याएपछि ल्यापटप बिगि्रयो । जसोतसो सामग्री सार्न भ्याएँ । झल्याकझुलुक गरेर ल्यापटपको पर्दा विकृत हुन्थ्यो । वैकल्पिक ल्यापटप खोजी अभियान सुरु भयो । मेसिनले डामेपछि नराम्रोसँग डाम्दोरहेछ । प्रविधिको नशा गाँजाको भन्दा चर्को हुँदोरहेछ । अन्ततः नाताले सालो दिलिप बर्तौलाको ल्यापटप लिएर आएँ र पुनः काम सुरु गरेँ । यसपटक मैले क्रमभंग गरेको थिएँ । उपन्यास एक महिनामा पूरा गरिछाडेँ मैले ।
पाण्डुलिपि पढ्न दिएर सुझाव संकलन गर्ने इरादा सुरुदेखि नै थियो । काठमान्डू गएर खगेन्द्र संग्रौला र गोविन्द वर्तमानलाई पाण्डुलिपि दिएँ । यता उदय, दारीबा, पुष्प पराग र सञ्जीव सुवेदीले पाण्डुलिपि पढे । कैयौँ वर्षदेखि उत्साहहीन र पछुताउमय बनिरहेको मेरो जन्म दिन पुस १६ गते यसपटक उल्लासमय बन्यो । उपन्यासको पाण्डुलिपि टेबलमा राखेर केक काटेँ, हृदय गदगद थियो, मैले बाचा पूरा गरेको थिएँ । यसपटक निराशाजनक ढंगले बितेको एक वर्षको समीक्षा गर्नु परेन ।
झन्डै जग्गा दलाल भइयो !
मैले उपन्यास लेखिरहेको कुरा धेरैजसो साथीलाई थाहा थियो । कवि श्यामलले अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकको एउटा लेखमा उर्गेनको घोडाका बारेमा उल्लेख गर्नुभयो । सायद त्यही पढेपछि सांगि्रला पब्लिकेसनका मणि शर्माले मसँग सम्पर्क गरे । उनले उपन्यासलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिन हुटहुटी लगाए र चैतमा छाप्ने योजना सुनाए । मैले झट्ट निर्णय गरिहाल्न सकिनँ । अर्कोपटक दारीबा र म भएर मणिजीसँग सल्लाह गर्‍यौँ । किताब छाप्ने र विमोचन गर्नेसम्मका योजना निर्माण गरेर चैत २८ गते विमोचन गर्ने टार्गेटसहित म हेटौँडा फर्किएँ ।
त्यसबीच हेटौँडामा मध्यमाञ्चलस्तरीय व्यापार मेला लाग्यो । ऋणको बन्दोबस्त गरेर ल्यापटप किनेँ । मकवानपुर क्याम्पसमा धमाधम कक्षा चल्दै थिए । मैले भने फागुनभरिमा उपन्यासको अन्तिम पाण्डुलिपि पठाउनु थियो । क्याम्पसप्रमुख र सबै प्राध्यापकले सिर्जनात्मक कामका निम्ति सघाउने उदार हृदय खोलिदिए । म दुईवटा कक्षा लिन मात्र क्याम्पस गए हुन्थ्यो । माघका अन्तिम दस दिन कुन हिसाबले पुनर्लेखन गर्ने भन्ने भयानक द्विविधामा बित्यो । पाण्डुलिपि पढ्ने साथीको विचारमा एकरूपता थिएन, सबैको प्रतिक्रिया सैद्धान्तिक र अमूर्त थियो । जस्तै, नाटकीयता कम भयो, छापामारको डायरी जस्तो भयो, समाज आएन इत्यादि । यी प्रतिक्रिया सुनेर कहाँबाट काम सुरु गर्ने भन्ने भयानक अस्थिरताको साम्राज्यमा म प्रवेश गरेँ । चिया पसलमा घन्टौँ बहस भए, तर ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेन ।
अन्ततः दारीबा र म ठूलो चार्टपेपर र मार्कर पेन बोकेर औद्योगिक क्षेत्रमा अवस्थित सुनसान चियापसल पुग्यौँ । जसै हामी चार्टपेपर चौरमा फैलाएर उपन्यासको अन्तिम खाकाका बारेमा छलफल गर्दै थियौँ, अरू मानिस हामीलाई जग्गा दलाल सम्झेर जग्गासम्बन्धी कारोबारका कुरा गर्न आइपुग्थे । उनीहरू चार्टपेपरलाई जग्गाको टे्रेसर नक्सा सम्झेका थिए । अन्तिममा ठोस सैद्धान्तिक निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ- उपन्यासको सम्पूर्णतः पुनर्लेखन गर्ने ।
अलबिदा गिरिजाबाबु, वेलकम उपन्यास
फागुनको आरम्भसँगै म पुनः कोठा नम्बर १०८ मा गुप्तबास प्रारम्भ गर्न पुगेँ । झन् कठोर तपस्या सुरु भयो । बाहिरी संसारबाट पूरै कटेर सिर्जनात्मक विपश्यना गरिरहेको थिएँ । क्याम्पसमा दुइटा कक्षा लिन मेरो छाया जान्थ्यो, म त कुर्सीबाट उठेकै हुँदिनथेँ । ढाड दुखेर बेलाबेलामा मुर्छा पर्छु झैँ हुन्थ्यो । वेलावेला बिरामी हुँलाझैँ तातिएर आउँथ्यो शरीर । तर, मैले हिम्मत हारेको थिइनँ । त्यतिवेलासम्म हिम्मत हारिनँ, जतिवेलासम्म मेरो टेबलमा ल्यापटप मुस्कुराएर बसिरहेको थियो ।
फागुन १५ गते एउटा उदास दिन थियो । मेरो ल्यापटप हरायो । निराशाको कालो बादलले घेरिएको मनले भनिरहयो, ल्यापटप चोरे पनि चोर्नेले त्यसभित्रका डिजिटल सामग्रीचाहिँ दिए हुन्थ्यो । मेरो उपन्यासका एक दर्जन अध्याय थिए सायद । यो एउटा भयानक दुर्घटना थियो । अब पुनः पहिलो वाक्य लेख्ने हिम्मत जुटाउन सकिरहेको थिइनँ म । मैले घोषणा गरेँ, अब उपन्यास समाप्त भयो, म तत्कालै होटल छाड्छु । दारीबा, पुष्प पराग दुई प्राणी मलाई कुरेर होटेल कम्पाउन्डभित्र बसेका थिए । उनीहरूले पनि घोषणा गरे- चोरले ल्यापटप पो चोर्‍यो, युग पाठकको दिमाग चोर्न सकेको छ र ?
चार वर्षदेखि गरिरहेको संघर्षको याद तगडा थियो । तैपनि पुनः उपन्यासको पहिलो हरफ लेख्नुपर्ने कल्पना मात्रले मलाई पानी-पानी बनाइदिन्थ्यो । तर, भागेर पो म कहाँ जान सक्थेँ ? मैले अघिल्ला दुई दिनमा आफूलाई स्वाभाविक बनाएँ र पुनः पहिलो हरफ लेख्ने हिम्मत गरिछाडेँ । पहिलेको भन्दा दुईगुणा गतिमा अघि बढ्नुको विकल्प थिएन । म लेख्दै गएँ । अनुभवले खारिएको थिएँ म । सबैले देख्दा पहिलो उपन्यास लेख्दै थिएँ, तर यसै क्रममा मैले तीन-चारपटक उपन्यास दोहोर्‍याएर लेखिसकेको थिएँ, अधुरै सही ।
निरन्तर लेखाइले पातापाखुरा दुखेर वेलावेला आँसु रसाउँथे आँखामा, अनायासै सुतिदिन मन लाग्थ्यो, एकान्त यस्तोसित आरोपित गरेको थिएँ वेलावेलामा चिच्याउन मन लाग्थ्यो । कम्मरको दुखाई कम गर्न पेनकिलरसमेत सुटुक्क खाएको थिएँ । सम्पूर्णतः कोठा नम्बर १०८ मा सीमित भएको थिएँ । मलाई खर्च वा बजेटको कुनै पर्वाह थिएन । स्वयं आफ्नै ज्यानको पर्वाह थिएन, पागलपनको पर्वाह थिएन, स्वास्थ्यको पर्वाह थिएन । बस्, म लेख्न चाहन्थेँ, लेखिरहन चाहेन्थेँ । साथीहरूलाई उपन्यास सक्किएको खबर सुनाउने उत्कट चाहनाले थिचिएर म आलसतालस भएको थिएँ ।
अन्ततः चैत ७ गते दिउँसो दुई बजेर एक मिनेट जाँदा उर्गेनको घोडाको अन्तिम शब्द लेखेँ र अन्तिम पूर्णविराम दिएँ । खुसीले आल्हादित मन खित्खिताएर हाँसिरहेको थियो । उल्लासित भएर फुर्किएका खुट्टा भुइँमा थिएनन् । साथीहरूलाई यो खुसीको खबर सुनाएर खुसी तुल्याउन हतार भइसकेको थियो । तर, कोठाबाट बाहिर निस्केर एभोकाडो रूखको फेदमा पुग्नासाथ होटल स्टाफले सुनाए- अघि १२ बजे गिरिजाबाबु बितेछन् नि । त्यस क्षणमा खुसी हुने मौका पनि गुमाएँ मैले ।
प्रस्तुति : विनोदविक्रम
Posted on June 19, 2010 by नेपाली मुटु
हुन पनि खेल दीपकले भनेजस्तै थियो, कुनै खेलाडीले गुडाउँदै बल लाने र विपक्षी खेलाडी हेरिरहने । ‘यस्तो खेल हेर्नु त समयको बर्बादी हो,’ हाफ टाइममा रंगाशालाबाट बाहिरिँदै उनले बताए । त्यस खेल ब्वाइज युनियनले ७-१ ले जितेको थियो । तर कुनै पनि गोलमा खेलाडी उमंग थिएनन् । त्यसैले रापिलो घाममा प्यारापिटमा थोरै देखिएका दर्शक द्विविधामा परेका थिए । एउटै प्रश्न उनीहरूले गरे, खेलमा किन जोस र रोमाञ्च छैन ?’
ब्वाइज युनियन र जावलाखेलबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, दोस्रो चरणका थुप्रै खेल उस्तै निरासाले छाएको थियो । दर्शकको चाह नतिजामा थिएन । खेल राम्रो नभएको मात्रै उनीहरूले गुनासो गरे । एपीएफले मच्छिन्द्रलाई ८-० ले हराएको खेलमा पनि दर्शकको समान गुनासा र प्रश्न थिए ।
अन्ततः क्लबका पदाधिकारीले नै मुख खोले, ‘म्याच फिक्सिङ भइरहेको छ ।’ खेलपछिको पत्रकार सम्मेलनमै म्याच फिक्सिङको बारेमा बोल्ने पहिलो व्यक्ति थिए, एपीएफका व्यवस्थापक प्रेमकुमार श्रेष्ठ । आफ्नो टिमलाई रेलिगेसनमा पार्न संकटा र ब्वाइज युयिनसँग ठूला क्लबहरू थ्रीस्टार, मनाङमस्र्याङदी, एनआरटी र मच्छिन्द्रले मिलेमतो गरेको उनले आरोप लगाएका थिए ।
धेरै क्लबले उनको आरोपको खण्डनसमेत गरे, फेरि त्यस्तो नबोल्न चेतावनी पनि दिए । तर नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय एन्फा भने चुपचाप रह्यो । न त उसले श्रेष्ठको आरोपको खण्डन नै गरे, न त झूटो आरोप भनेर उनलाई कारबाही नै गर्न सक्यो । यसअघि ११ औं चरणमा एनआरटी र फ्रेन्ड्सको खेलमै म्याच फिक्सिङको आरोप लागेको थियो, खेलाडीलाई । त्यसमा प्रशिक्षक मृगेन्द्र मिश्रले आफ्ना गोलकिपर रूपक श्रेष्ठलाई खेलाएनन् । ‘रूपकलाई एनआरटीसँगको खेलमा नखेलाउने आन्तरिक निर्णय हो,’ मिश्रले भनेका थिए । त्यसपछि उनले कहिल्यै रूपकलाई गोलपोस्टको जिम्म दिएनन् । किनभने उनमा रूपकप्रति विश्वास थिएन ।
लिग समाप्तिको संघारमा आइपुग्दा धेरै तथ्य छर्लंग भइसकेको छ । उपाधि होडमा होइन, रेलिगेसनबाट बच्नका लागि म्याच फिक्सिङको भित्री खेल भएको थियो । आरोप लगाउने र खण्डन गर्नेको पोस्टम्याच कन्फ्रेन्समा जुहारी नै चल्यो । खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यस्थापक र क्लबका पदाधिकारी म्याच फिक्सिङको आरोपबाट मुक्त हुन सकेनन् । ब्वाइज युनियन रेलिगेसनमा परेपछि धेरै रहस्य बाहिर आयो । ब्वाइज युयिनका प्रशिक्षक कुमार कटुवालले पत्रकारमाझ भनेका थिए, ‘अघिल्लो लिगमा मच्छिन्द्रलाई गाह्रो पर्दा हामीले छोडेका थियौं । यस पटक हामी रेलिगेसनको संघारमा पर्दा उसलाई सहयोग गर्न भन्यौ । तर मानेनन् ।’ त्यसले तीन वर्षपछि सम्भव लिगका खेलको नतिजा अगाडि नै तय भइसक्ने स्पष्ट पारेको थियो ।
नेपाली फुटबलमा म्याच फिक्सिङ नौलो भने होइन । एन्फाका उपाध्यक्षसमेत रहेका एनआरटी अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पहिले लिगमा म्याच फिक्सिङ हुने गथ्र्यो ।’ संकटाले खेलाडीलाई गरेको कारबाही म्याच फिक्सिङको प्रमाण हो ।
संकटाले ब्वाइज युनियन र जावलाखेलसँगको खेलमा शमशेर खत्री, कमल विष्ट र सौरभ श्रेष्ठलाई खेलाएनन् । नखेलाउनुको एउटै कारण ‘म्याच फिक्सिङ’ भएको संकटाका अध्यक्ष इन्द्रमान तुलाधरले भने, ‘प्रतिद्वन्द्वी टिमका प्रशिक्षकले उनीहरूलाई योजनाबारे निर्देशन दिएका थिए । त्यसैले हामीले खेलाएनौं र त्यो एक किसिमको कारबाही हो ।’ तुलाधर एन्फाका कार्यकारी अधिकृत पनि हुन् । संकटाबारे उनले भने, ‘फिक्सिङको आरोप आधारहीन छ । यत्य हो भने हामी रेलिगेसनमा पर्दैनथ्यौं ।’
पहिलो चरणमा प्रभावशाली प्रदर्शन गरेको मच्छिन्द्र पनि म्याच फिक्सिङको आरोपले निकै आलोचित रह्यो । मच्छिन्द्रका प्रशिक्षक मेघराज केसीले भने, ‘बाहिरबाट हेर्दा फिक्सिङजस्तो देखिए पनि प्रमाणको अभाव हुनसक्छ ।’
यो लिगमा उपाधिको होड, रेलिगेसनको प्रतिस्पर्धा र रोमाञ्चक खेलभन्दा पनि बढी चर्चा पाएको ‘म्याच फिक्सिङ’ मा एन्फा मुकदर्शक नै छ । ‘ए’ डिभिजन क्लबका प्रतिनिधिकै बाहुल्य एन्फाका माथिल्ला पदमा भएकाले उनीहरुसँग पनि शंका गर्नुपने देखिन्छ । पूरै मिडियामा चर्चा हुँदा पनि म्याच कमिस्नर र एन्फाको अनुशासन कमिटीले म्याच फिक्सिङबारे रिपोर्ट त के क्लब, खेलाडी र पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरणसमेत लिएको छैन ।
लिगमा म्याच फिक्सिङको हल्ला सुनिएको छ र त्यो प्रमाणित भए क्लब, खेलाडी र व्यवस्थापकलाई कडा कारबाही गर्ने एन्फा अध्यक्ष गणेश थापाले एक कार्यक्रममा बताएका थिए । तर उनको बोलीले पनि दशरथ रंगाशालाको प्रतिस्पर्धालाई प्रभावित पार्न सकेन । उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘म्याच फिक्सिङबारे अहिले हामीसँग स्पष्ट नीति छैन । त्यसैले अर्को लिग सुरु हुँदासम्म नीति तयार गरिसक्नेछौं । त्यसलाई कडा रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछौं । योपल्ट भने हामीसँग ठोस प्रमाण छैन । त्यसैले केही गर्नसक्ने स्थिति छैन ।’
केही अघि एन्फाको अनौपचारिक बैठकमा म्याच फिक्सिङबारे कुरा उठेको थियो । त्यसमा स्पष्ट नीति र विशेषज्ञ टोलीको समिति बनाउनेबारे चर्चा भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा म्याच फिक्सिङलाई ठूलो अपराध मानिन्छ । यस्तो आरोप प्रमाणित भएपछि इटालीको युभेन्ट्सजस्ता ठूला क्लबलाईसमेत घटुवा गरिएको थियो । हाम्रै छिमेकी चीनमा पनि दुई ठूला क्लबलाई कारबाहीस्वरूप घटुवा गरिएको थियो । नेपालमा पनि त्यस्तै नीति र त्यस्को कार्यन्यवन खाँचो भइसकेको छ ।
Posted on June 15, 2010 by नेपाली मुटु
तपाईलाई आफ्नो केबललाइन बिग्रीएको जस्तो त लागेको छैन ? यो आवाज केबलको खराबीले गर्दा सुनिएको होइन है । यो अर्कै कारणले हुन्छ । के हो त यो ? यो भुभुजेला रहेछ। एक मिटर जति लामो बाजा दक्षिण अफ्रिकामा फुटबल हुँदा फ्यानहरुले बजाउँदा रैछन्।
गत वर्ष दक्षिण अफ्रिकामा कन्फिडिरेसन कप हुँदादेखि यसको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकहरुले सुन्न थालेका हुन्। हामी जस्ता कयौँले भने यही विश्वकपमा यो आवाज सुनेका हौँ। टेलिभिजन प्रसारकहरुले स्टेडियमको प्राकृतिक आवाज सुन्नका लागि राखेका माइकमा भुभुजेलाको आवाज मात्र सुनेको भनी गुनासो गरेका छन्। केही खेलाडीहरुले पनि गुनासो गरेका छन्। तर फिफाका बोस सेप ब्लाटर भने स्थानीय परम्परा भन्दै यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने आवाजलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ यो आवाज ? के यसमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई ?